स्वास्थ्य पेजकौशिल्या अस्पतालमा फिजियोथेरापीप्रति विरामीको बढ्दो आकर्षण (के हो फिजियोथेरापी ?) - स्वास्थ्य पेज कौशिल्या अस्पतालमा फिजियोथेरापीप्रति विरामीको बढ्दो आकर्षण (के हो फिजियोथेरापी ?) - स्वास्थ्य पेज
कौशिल्या अस्पतालमा फिजियोथेरापीप्रति विरामीको बढ्दो आकर्षण (के हो फिजियोथेरापी ?)
बासगढी: बर्दियाको बासगढीस्थित कौशिल्या अस्पतालमा फिजियोथेरापीप्रतिको आकर्षण र विश्वास विरामीहरुलाई बढ्दै गएको छ ।
हड्डी खिइएको, नसा च्यापिएको, मांसपेसी दुख्ने, झमझमाउने, लुलो हुने, पोल्ने, प्यारालाइसिस, पक्षघात जस्ता स्वास्थ्य समस्या लिएर अस्पताल आएका विरामीहरु थेरापी पछि निको हुनेक्रम बढेसँगै अस्पतालप्रति विरामीको विश्वास बढेको हो ।
अहिले दैनिक १० देखि १५ जना विरामी थेरापीका लागि अस्पतालमा आउने गरेको फिजियोथेरापिष्ट आसुकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । अस्पतालले लेजरथेरापीबाहेक अन्य सबै थेरोपी सेवा उपलब्ध गराएको छ ।
अस्पतालका प्रशासकिय प्रमुख शंकर न्यौपानेले दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय उपकरणबाट निकै कम मूल्यमै सेवा प्रवाह गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बर्दियाबासीको आर्थिक अवस्था सबैलाई केलाएर सस्तो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले अस्पतालले जेष्ठ नागरिक, अपांगता, एकल महिला, अनाथ बालबालिका, मुक्तकमैयालगायतलाई अनिवार्य १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको पनि न्यौपानेले बताउनुभयो ।
सबै रोगहरु औषधि खाएर मात्रै पूर्ण रुपमा निको नहुन सक्छन् । कतिपय रोगहरु औषधि नखाई व्यायाम वा अन्य विधिबाट पनि निको गराउन सकिन्छ । औषधि नखाई व्यायाम, हातले गर्ने उपचार वा विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट गरिने उपचार पद्धति नै फिजियोथेरापी हो ।
सिधा अर्थमा भन्दा प्रशिक्षित फिजियोथेरापिस्टद्वारा व्यायामको माध्यमबाट शरीरको मांसपेशीहरुको सही अनुपातमा सक्रिय गर्ने विधा नै फिजियोथेरापी हो । नेपालीमा यसलाई भौतिक चिकित्सा विधि पनि भनिन्छ ।
फिजियोथेरापी सबै किसिमका रोगको निवारणका लागि प्रभावकारी हुन्छ । जस्तो हड्डी खिइएको होस् वा हाडजोर्नीसम्बन्धी अरु समस्यामा प्रयोग हुने फिजियोथेरापीलाई अर्थोपेडिक फिजियोथेरापी भन्ने गरिन्छ । मुटुसम्बन्धी फिजियोथेरापीलाई कार्डियोथेरापी जस्ता नामले चिनिन्छ । यसरी अनेकथरीका समस्याको एउटै निदानको उपाय हो फिजियोथेरापी ।
(बर्दियाको बासगढीस्थित कौशिल्या अस्पतालमा कार्यरत फिजियोथेरापिष्ट आसुकुमार शाहसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
१३ चैत्र २०७८, आईतवार प्रकाशित